Chii chiri chokwadi nezve kuuraya kwaDerk Wiersum uye zvinoreva chii kune 'korona chapupu'? : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we18 September 2019	• 26 Comments
In ichi chinyorwa Ini ndakarondedzera maitiro ekupambwa kwaWillem Holleeder Heineken pamwe nemhondi dzaakaita zvaingave PsyOps uyo aifanira kugadzirira mutemo kuitira musimboti weiyo 'korona chapupu'. Kugadziriswa kwechapupu che korona (yakaunzwa neHolleeder PsyOp?) Zvinoreva kuti nyika inogona kumhan'arira chero munhu waanoda, nekuti chapupu che korona chingangoita chisingazivikanwe (kuburikidza ne "zvisingazivikanwi panjodzi chapupupuri" maitiro). Uku kurwiswa kwe "Derk Wiersum" kunogona kuona kuti gweta rinodzivirira rinogona kubva zvino kuita zvisingazivikanwe kana kupinda muchirongwa chekudzivirira. Ipapo iwe unogona kunge uine chisingazivikanwe korona chapupu, chinodzivirirwa nemutemo asingazivikanwe nechisarudzo chechokwadi chekutongwa. Muchidimbu: iyo nyika inogona kuwana munhu wese kumashure kwebar pasina chiratidzo.
Iyoyo pamwe ipfupiso pfupi kwazvo, asi dzimwe nguva chikara chinongofanira kutaurwa nemazita. Pakutanga nhasi, pane yangu Facebook nguva yakatarwa, ndakanetseka kana Dirk Wiersum aripo kana kana isu tingave tichitarisana neakadzika maitiro. Uye zvakare, vavakidzani uye vazivikanwe vanofanirwawo kuve faks kuburikidza neiyochete tekinoroji (isa kumeso yakagadzirwa kuburikidza neAI pamusoro pekunyora munguva chaiyo uye kuumbiridza nhoroondo uye yemagariro midhiya mafilifomu akagadzirwa kuburikidza neakadzika fake). Iwe unofunga kuti izvo zviri kuenda zvakanyanyisa here? Ini ndinonzwisisa izvo, asi iyo tekinoroji inoenda kure uye zvese zvatinoona pamufananidzo uye zvinonzwika zvinobva kune vezvenhau uye avo midhiya ari mumaoko evanhu vakaita saJohn de Mol (bilionea, muridzi we ANP naThelpa). Vaya venhau vane nzira dzese dzavainadzo kuburitsa nhau dzenhema. Chokwadi hapana humbowo hweizvozvo. Nekudaro, ndapota verenga ichi chinyorwa zvakafanana zvakanaka kuti uwane izvo zvinogoneka.
Ehe, mhinduro dzemagariro dzenzanga dzinogona zvakare kufambiswa nehunyanzvi kuburikidza nemhando dzese dze (chaidzo kana dzakadzika?) Mapikicha anopindura nemataudzo akadai sekuti: "Kutaura chimwe chinhu chakadai chinotsamwisa vafirwa". Chokwadi zvinosemesa kuramba kuti munhu afa kana paine humbowo hwakasimba. Zvingave zvakanyanya kurwadza dai takanga tichiri kuzvishandisa kwemakumi emakore PsyOps yakatamba kuva. Zvandinoita kukwidza mukana, pasina kutora chinzvimbo kuti ndizvo chaizvo zvazviri.
Chero zvazviri, nyaya iyi yaizokwana chaizvo mune Dambudziko, Reaction, Solution hukuru, mairi chinetso chakazvimiririra uye mhinduro dzakakonzerwa, zvinotungamira kudanwa kwemitemo yakaoma. Kuti mutemo uyu wakasimba unogona kurova vanhu vamwe chete ivo vaidana munguva yemberi unokanganikwa nekukurumidza mumanzwiro ese uye runyararo. Kana iyo nyika ichida kunyatsoita kuti munhu wese apfigwe nemabhawa, munhu asipo ("munhu asingazivikanwe korona") anogona kupa chirevo chekupupurira (tarisa Holleeder nyaya maererano nechisarudzo chekorona korona). Gweta rinodzivirira harifanirwe kunge riripo (nekuti ringave risingazivikanwi mune ramangwana) uye saka munhu wese anogona kupedzisira asara kumashure kwebar. Chero munhu anopesana nehutongi anogona kuve akarwara nepfungwa kana kuvharirwa nzira kuburikidza neyenhema.
Sezvo icing pane the dessert panogona kunge paine mutemo unoita kuti kupambwa kuvepo. Mushure mezvose, isu tinofanirwa kukurumidza kuchenesa zvombo zvese zviri pasi pemubhedha mudzimba idzodzo muAmsterdam! Izvi zvinogona uye zvingangodaro zvakadaro!
DNA iri panguvo yaAlin Faber yakatungamirira kuna Michael Panhuis, asi yakanyanyisa!
Chii chiri chokwadi nezvekurwiswa nerufu semhedzisiro yekufamba netsoka mu Assen?
Uchapupu hwekuti Gerald Roethof anoita sewe gweta rePyyOp munyaya yeJos Brech
Inotevera inopinda muNicky Verstappen - Jos Brech psyop? Vana zvinonyadzisira zvakawanikwa!
Tags: advocaat, Derk Wiresma, Derk Wiersum, Dood, Featured, mharidzo yenhau, kuuraya kuedza, akaurayiwa
18 September 2019 pa 21: 51
Kana iwe usina kutevera izvo zvakapfuura (Fake) zviitiko saka iwe waizotenda nhau dzanhasi 18 Sep 2019 zvakare.
Hap kumedza, gadzirira, saka iwe unofanirwa kutevera iyo (fake) nhau nekuti kana zvisina kudaro haunganzwisisi matanho kana mhedzisiro ye (fake) nhau.
18 September 2019 pa 21: 53
Vanhu nevana zvakare vanoti,
Ungaita sei kumira mushure memaawa mashoma uye kuti zvinechekuita nebasa rake, neZVISATI zvaitika zvave kuferefetwa?
Kamuri yechipiri ingataura sei kuti nekukurumidza, kunyangwe zero zero yaitwa.
Nei tisinganzwi nezve CPR
Hapana akamuka kubva kuma ambulensi uye yaivepi timu yekunetseka. Kwete, vaivapo here?
Zvingaitike sei kuti muvakidzani asina kunge akanzwa kurira achiri mukomana pasi munzira akaudza vechidiki kuti amutswa nebhutsu.
Unozviwana sei mumusoro mako zvachose kuratidza vana seizvi, vabereki vakaudzwa?
Uye muvakidzani sei zviri sei kuti iwe hauna kunzwa chero kurira.
Unogona kutaura kare kuti nzvimbo inonhuwirira zvishoma ...
Mwana mudiki akamuka bang, migwagwa ichienda
Muvakidzani hapana chaakanzwa?
18 September 2019 pa 22: 28
Netekinoroji yakadzika unogona kupfekedza murume ane mwana pamapfudzi uye nekuisa chisipo (asi chaicho) kumeso pamusoro pacho (kusanganisira izwi rakashandurwa).
18 September 2019 pa 22: 57
Iko kutungamira kwemakumbo kunounza pfungwa mune yekugamuchira mode (NLP hypnosis)
19 September 2019 pa 00: 32
Ona apa kuti maitiro aya anoshanda sei:
19 September 2019 pa 08: 19
Chokwadi, vhidhiyo yemuvakidzani iyeye ingangove iri fake futi.
Tsananguro diki, asi ndokumbira mberi.
Iye murume kumashure akasara aine dumbu hombe achifamba achidzokera kumashure; ipapo mumvuri unove zvakare uye kwete zvakare, dzimwe nguva mumvuri unenge usipo.
Muvakidzani iyeye; tarisisa kusiri iko kwechisikigo kufamba kwemeso
uye inonzi inonzi tap mumaziso. Fake!
Iyo backlight yakapfurwa ichishandisa lens-flare athari, ha ha, yakachipa maratidziro nekuti izvo zvinoreva kuti mwenje haufanani nejasi remukomana uyo anofanirwa kuchengeta musoro wemuvakidzani mumumvuri.
Iyo yakakwiridzirwa pamashure kumashure inofanirwa kunge iri dombo rakaomeswa nezuva.
Mumvuri weiyo van pamadziro une pakona isina kunaka kana iwe ukaenzanisa nemumvuri weiyo chigadziko.
Wakazara mufananidzo wechiso wakasviba kusanzwisisika, kungopenga kwemashoko, AT5 ine kamera yepamusoro, asi kwete ikozvino, ha ha, inotaridzika zvikuru Fake.
Ehe hausi kuona izvozvo pa-smartphone, asi iwe unoona izvo pane yekutanga yakanakisa laptop kana iwe zoom mune zvishoma.
18 September 2019 pa 21: 55
Teerera kune anenge achibvunzurudza. Hiddema inobvunzwa chimwe chinhu, midhiya yatove nemhinduro.
Anobvunzurudza anoti: "Zvinogoneka kuti gweta rinotsigira chapupu che korona rinogona kuenda kuchitsuwa chisina kuvanzika kwehupenyu hwake hwese."
Saka zvinotenderwa kuramba zvisingazivikanwe, vezvenhau vakanga vatofunga kuti mutambi Hiddema uyo, maererano naye, akasvetuka kubva mukutamba (sekutaura kwaachaita mubvunzurudzo) anofanira kugunun'una achibva kuThe Hague kunge huku ine masimba.
miniti 3; 37
18 September 2019 pa 22: 27
Ah hongu uye chimwe chinhu chinouya:
"Isu tinodaidzwa kuti tirege kuzviita toga."
Nenguva isipi 'kuzviitira' kunogona kutungamira kuchirango.
Patricia van Oosten akanyora kuti:
19 September 2019 pa 08: 41
Idd iye chapupu nemwana iyeye zvino zvinoita kuti ndive kukahadzika. Inorasikirwa nemanzwiro ese chaiwo. Iye murume munyoro kubva ku 'art of misdirection' vhidhiyo iwe yaunogovana ndiyo itsva rudzi rwe psychophytes vanoiwana vachinakidzwa zvinonakidza kuti masasi havachakwanise kuenderera mberi nehunyanzvi uye saka vanogara vachibiridzirwa. Kazhinji kubva kune iyo imwe kirabhu yevakasiya-uropi vateveri vaimbove vakaremadzwa neimwe mhando yetsika pane 8e zuva mushure mekuzvarwa.
Hiddema (uye Wstersma) zvakare inoita kunge ichinetswa neizvi. Zvakambove pachena kwandiri kuti Hiddema inofanirwa kutungamira huwandu hwevanhu (uye iyo paramende) kuenda kumapurisa, iko kwavanongonzi chokwadi chinongedzera kune chimwe chinhu, zvese zvinodaidzwa kuti 'tsotsi' uye zvinonzi zvabuda kunze kwemutemo. Kunyangwe zvakadaro zviri naBaudet kana navan Otten, haana basa. Sezvineiwo, ini handinzwisise kuti anogona kungoveura nharaunda moccro pamusoro pemuzinga, 'zvese' pfuti pasi pemubhedha wavo, zvese zvakaderera IQ, kunaka kwangu ndizvo chaizvo chinangwa changu kuti titange kutanga nehondo iyoyo VaMuslim, sezviri pachena havagoni kumirira neNOO yavo neIsrael Center.
Yakaderera yakaderera. Nyonganiso yose.
19 September 2019 pa 13: 06
Ko Mocro Mafia iriko zvechokwadi here kana kuti vashoma vakadzidziswa zvakanaka AIVD vadzidzisi vanobvumidzwa kutamba Mocro Mafia?
19 September 2019 pa 14: 03
Kuedza kudiki kunoitwa kuvanza chokwadi chekuti Madurodam iri chaiyo nyika yemapurisa, akavanzwa hachisiri iro shoko rechokwadi. Junta ari kutanga kusvika padyo, gweta risingazivikanwe, mutongi asingazivikanwe ... mhosva yakagadzirirwa-
19 September 2019 pa 16: 55
Nice deepfake kugadzirwa John .. asi pepa mune izvo binders rinotarisa chaizvo mhandara. Izvi hazvina kumbobvunzwa. Kugadzirwa kwakanaka kwefirimu ..
19 September 2019 pa 17: 24
Nekuda kwekureruka, tinokanganwa kuti idzi mhando dzeHegelian zvigadzirwa ndiyo yekukurudzira kuchengetedza kana kudzoreredza varidzi venyika, gweta / mutori venhau / korona chapupu chiri nani. Iko kudzoserwa kwemari nekushayisa mutero zvakare mutyairi akakosha pano. Nhema dzinotonga
20 September 2019 pa 07: 25
Kutanga isu tanga tine iyo Holleeder mafia; ikozvino tine Mocro kana nacromaffia naRidouan Taghi. Vaviri vari zvakajeka AIVD PsyOp pawns vanobvumidzwa kutamba yavo basa mune fake mafia. Izvo zvese zvinoitwa kuti zviite zvitsva mapurisa ehurumende matanho. Kurwiswa kwakavakirwa chivakwa cheTelegraaf kwaive kwekunyepa; kurwiswa kwechivakwa chePanorama kwaive kwakaitika. Zvese zvinhu ndezvekunyepa. Fake nhau zvigadzirwa zvezvenhau zvakabatana nevatongi. Usadiridza mukati! Ndiro Dambudziko, Reaction, Solution mutambo kubva kuhurumende kuburitsa mapurisa ehurumende nhanho nhanho!
20 September 2019 pa 09: 41
Uye hongu, tarisa pazviri
20 September 2019 pa 09: 26
Ndatenda chaizvo nekunyora uku kwakajeka.
Imwe ingangoona iyi pfungwa ichokwadi.
Asi nekutsanangura kwako uye kwakarondedzerwa nhoroondo contours ini ndinowana yako nyaya
zvinonzwika zvinogutsa kupfuura zvezvenhau.
Pane mamwe madanha pane internet anogovana zvaunofunga? Izvi zvinofanirwa kuenda nehutachiona mumaonero angu.
20 September 2019 pa 14: 14
Kwete, hapana mamwe maranji.
Zvese midhiya zvakasarudzika zvinoongororwa ne kure. Niburu.co, semuenzaniso, inoitiswa neyaimbova sweetheart kubva kuna Freddy Heiniken. Iye haazombonyora kuti kutapwa yaive nhema.
Akadzora mimwe midhiya edza kuedza kuisa pfungwa pa911; nyora nezve ufos etc. uye gara uchingotaura nezvekudonha mureza (izvo zvakasiyana neye PsyOp hoax).
21 September 2019 pa 16: 56
Grapperhaus anotaura chokwadi here?
Pane ino saiti yakaratidzirwa kakawanda kuti kurwiswa kwakavakirwa chivakwa cheTellgraaf paBasis weg ndeyekunyepedzera uye kuti kurwiswa kwakavakwa chivakwa chePanorama zvakare iri nyaya yakatarwa. Anti-tangi grenade iyo inosiya zvakanyanya kukuvadza kupfuura kukuvadzwa kwakaratidzwa uye kune.
Kana avo vese (vanonzi) matsotsi akabatanidzwa neizvozvo (nekunyepedzera kwekunyepa) unogona kutaura kuti Grapperhaus haana kuita basa ravo remumba nemazvo uye Parool haana kuratidza izvo zvakaratidzika pane yavo email. Vanongotaura chimwe chinhu uye vanoita chimwe chinhu uye isu tinofanirawo kutora vanhu avo zvakakomba.
Uye nei chinyorwa ichi chisisiri kugoverwa, rusununguko rwekutaura runotsvairwa chose nevarume vanotuka saJohn der Heuvel, anofanira kunyara paari, BAH!
21 September 2019 pa 17: 44
Grapperhaus iri kubatikana nezvimwe zvinhu ..
21 September 2019 pa 17: 09
Mamiriro ekunze ane chimiro chakadai che mega hoax ndechekuti ivo vanonyanya kufarira uyo anokanganisa kupfuura iye akabatwa (hapana imwe sarudzo nekuti zvakanaka kana iri hoax ……
Uye zvakadaro hapana kana imwechete kiyi yakapihwa nemvumo inonzi mapurisa, zvese zvekufungidzira
21 September 2019 pa 17: 47
pamwe VenJ uye OM vakagamuchira mamwe matipi kubva kumhuri ye zorregieta. Kunyange humwe humbowo hwekuti chinhu icho chose chakamiswa uye kuti vanhu havashivirirwi, nekutya kuti nyaya iyi isunungurwe nekuda kweicho chiri psyop yemitemo mitsva. Shamisa kuti grapperhaus pakarepo isina kurongedzwa sei 🙂
24 September 2019 pa 15: 01
pablo escobar haibvumidzwe kusunga mataro e tagi ~ (kana iripo), mumwe mutambi mumashure meimwe. Kuratidzira kwakadii, kunogona kuita zvishoma!
24 September 2019 pa 20: 33
Kutonga kwakakura kwakadaro, sekurwiswa kwegadziriro yekutonga, kudzikisira kutonga kwemutemo uye zvichingodaro
nepo pasina muiti wemhosva akabatwa nemhosva, asina kana kuwanikwa, hapana fungidziro, hapana kana chinhu uye zvakadaro zvirevo zvekupokana.
Vavariro inoshoropodzwa neMedia, kuongorora nemifananidzo matatu chete yeiye akabatwa, iine chete 1 vhidhiyo yeiyeye akabatwa.
Kune kupi mhuri yemagweta, iyo nyaya yese inoisa vezvenhau panjodzi nekuda kwechinangwa
kusimudzira kune makumi matatu-matatu simba pasina chero chirevo kune uyo anogadzira.
Ndekupi magweta muNL ari kutsvaga uyu mubvunzo unomanikidza, uripi mutemo!
28 September 2019 pa 17: 31
Nguva pfupi mushure mekurwiswa, chinyorwa chakatumirwa online umo muvakidzani akataura kuti alarm yake yewadhi yakaenda 07: 33, uye yakazonzwa kurira ...
Vanhu vanoshandisa piritsi imwe vanofanirwawo kurapwa zvinoenderana neGrapperhaus. Zvakanyanya kuitira Dutch danho rekubvumirana… ..
Gweta nyowani kubva zvagadzwa, ndiani acharamba asingazivikanwe. Vatongi nevapomeri vanogona zvakare kuramba vasingazivikanwe mune ramangwana. Kana mumwe munhu achifanirwa kunyararwa, zvese zvavanofanira kuita kugadzira kutyisidzira kuti aedze munhu iyeye mumatare asingazivikanwe wedare nekuvakanda mutirongo ...
8 October 2019 pa 19: 18
Ah hongu kunwa kunonakidza muRode Hoed uye kuva nekukurukurirana nevatongi uye magweta uye echokwadi vachuchisi nemamwe ma gown, isu tinoziva isu
Uku kutaura kunobhadhara zvakakwana mubhadharo, quoute: "Izvo 9 / 11 mu2001 zvaireva nehurongwa hwepasi, chiratidzo chakadai kuuraya kwegweta nekuda kwekuita kwehunyanzvi pabasa reDutch repamutemo".
8 November 2019 pa 00: 14
Uye zvakare ona pano mupepanhau rekunyepedzera reNetherlands iro bhuku ringa / rinogona kusaburitswa.
Kana kuti bhuku raigona kusimudzira chifukidzo kune ngano dzese dzakakwana, zvinoreva fungidziro izere.
Hatifanire kumirira makore mashoma kudzamara vanhu vakafungirwa zvakanaka vanoziva nezvekubiwa kwenhema vagadzwa, uye ipapo ndipo chete pavanonyatsoburitsa iyo HOAX HEINEKEn,
HEINEKEN HAASHURE PAKABVUNZWA ASI ITI KUTI AIDZE ROPA RAKO RINONESESA 😉 Vacheki
« Pachave nehondo pakati peUS neIran nekukurumidza zvikuru izvozvi?
Greta Thunberg UN kutaura kunotiyeuchidza kwe "vacheche vanokandwa kunze kwevanopinda" kutaura muIraq hondo »
Total Visits: 13.742.730
SalmonInClick op Nhanho yekutanga inonyora, iyo yechipiri nhanho kusasanganiswa: bhatani rekudzivirira
Sunshine op Nhanho yekutanga inonyora, iyo yechipiri nhanho kusasanganiswa: bhatani rekudzivirira
Martin Vrijland op Nhanho yekutanga inonyora, iyo yechipiri nhanho kusasanganiswa: bhatani rekudzivirira
The "Chokwadi Sezvatinoriona"
Iri bhuku ndiyo pfupiso yekupedzisira yechokwadi venhema uye yakaunganidzwa Truman Show umo vanhu vanoitwa kuburikidza nehurongwa kubva kuberekwa kusvika paguva. Iri bhuku rinopa kutsanangurwa kwakadzama, asi pamusoro pezvose zvinouya nemhinduro yakajeka.
Mutengo € 24,95
Tenga bhuku racho